Waxaa la yaab leh si ay u soo bixi video goobta kasta, soo maaha? Haa, article aad u sheegto, jidadkooda oo dhan si ay u soo bixi videos ka websites. Read More >>
taas macnaheedu waa mid kasta oo ka codsiyadaas leedahay kaydinta shakhsi u gaar ah, sidaa darteed in aysan u baahan yihiin in ay dib u soo ceshano xogta ka qayb kale. Read More >>
Posted by Selena Lee | 12.12.2015
Duubo saakay ka dibna uploading waxyaabaha u goobood oo kala duwan waxaa la isku dayaa in uu ka Waali dadka muddo ah hadda iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in MA Read More >>
Apple Inc nidaamka kaydinta iCloud u isticmaala iDevice in uu kaydiyo xogta digital iyo goobaha. The user id tufaax helo kaydinta free 5GB haddii users loo baahan yahay cusboonaynta kartaa kaydinta by bixinta fiiga bil kasta. Read More >>
In kasta oo xaqiiqda ah in macruufka 9 ayaa la filayaa in ay ka buuxeen qaababka cusub oo weyn, waxaa weli jira qaar ka mid ah oo naga mid ah oo ma doonayo inuu sii macruufka 9. Read More >>
Nadiifinta aad iPhone majorly ku xiran tahay sida aad u ogaado isticmaalka xusuusta iyo sida hufan qalab cudur-aad isticmaalayso waa. Read More >>
Waxaa jira badan oo DVD abuure barnaamijyada freeware heli karo. Maqaalkani waxa uu ku siin doonaa liiska tobanka DVD Creator barnaamijyada sare freeware. Read More >>
Isagana iyo kuwii ku caashaqi jiray ciyaarta waa users oo mar walba doonayaan inay muujiyaan awoodiisa dadka kale iyo sabab la mid ah waxaa sidoo kale in la xusay in user wuxuu hubinayaa in uu yahay in sida ugu fiican oo gobolka th Read More >>
Ma sii Nadiifinta files junk ka iPhone waa gumaarka ah. Si fudud Waxaad ka heli kartaa tan waxan samaysay iyadoo la isticmaalayo mid ka mid ah nidaamyada hoos ku siiyo. Read More >>
Barnaamijyada ciyaaraha iyo software ciyaaraha waxaa mar walba sare dalbaday in ay dadka isticmaala iyo waxa oo dhan waxaa sabab u ah xaqiiqada te in dadka isticmaala ee ma aha oo kaliya geliyaan videos u websites caan ah, laakiin waxa ay sidoo kale hubineysaa in tha Read More >>
Waxaa jira arimo dhowr ah oo aad u baahan tahay in ay si joogto ah u tirtirto haddii aad rabto in aad si aad u hubiso in aad taariikhda shakhsiga ah iPhone ahaato qarsoodi mar walba. Read More >>